Ɔbɔadeɛ, “Ɔsoro ne Asase Yɛfo” | Bɛn Yehowa
Adebɔ Tumi—“Ɔsoro ne Asase Yɛfo”
1, 2. Ɔkwan bɛn so na owia da Yehowa adebɔ tumi adi?
SO WOABƐN ogya ho anadwo a awɔw wom pɛn? Ebia woteɛɛ wo nsa ma ɛbɛn ogya a ɛredɛw no sɛnea ɛfata na ama wo ho ayɛ wo hyew. Sɛ wobɛn ho pii a, ɔhyew no mu yɛ den. Sɛ wokɔ akyiri pii nso a, anadwo mframa a emu yɛ nwini no bɔ fa wo ho denneennen, na awɔw de wo.
2 “Ogya” bi wɔ hɔ a sɛ ade kye a ɛma yɛn ho yɛ yɛn hyew. Saa “ogya” no redɛw wɔ akyirikyiri bɛyɛ kilomita ɔpepem 150! * Hwɛ tumi a ɛbɛyɛ sɛ owia no wɔ a wutumi te ne hyew bere a ɛwɔ akyirikyiri saa no! Asase no twa nuklea fononoo nwonwaso no ho hyia wɔ beae bi a ɛma ntam kwan no yɛ nea ɛfata. Sɛ asase bɛnee ɛho pii a, anka ɛso nsu bɛyow; sɛ ɛkɔɔ akyiri pii nso a anka asase nyinaa bɛyɛ nsukyenee. Sɛ yɛn okyinnsoromma yi bɛnee no pii anaasɛ ɛkɔɔ akyiri pii a anka nkwa ntumi ntra so. Hia a owia hann ho hia ma nkwa akyi no, emu tew na ɛyɛ adwuma yiye, na ɛyɛ dɛ nso.—Ɔsɛnkafo 11:7.
Yehowa ‘na osiesiee akanea ne owia’ no
3. Nokwasɛm a ɛho hia bɛn na owia di ho adanse?
3 Nanso, nnipa dodow no ara bu owia adewa, ɛwom mpo sɛ ɛno na wɔn nkwa gyina so de. Enti, wonhu nneɛma a yebetumi asua afa owia ho no. Bible ka Yehowa ho asɛm sɛ: “Wo na woasiesie akanea ne owia.” (Dwom 74:16) Yiw, owia hyɛ Yehowa, ‘ɔsoro ne asase yɛfo’ no anuonyam. (Dwom 19:1; 146:6) Ɛyɛ ɔsoro abɔde a wɔn dodow nni ano a ɛma yehu Yehowa adebɔ tumi no mu biako pɛ. Ma yɛnhwehwɛ eyinom bi mu yiye na afei yɛnnan yɛn adwene nkɔ asase ne nkwa a ɛwɔ so no so.
“Momma Mo Ani So Nhwɛ Ɔsoro, na Monhwɛ”
4, 5. Ɔkwan bɛn so na owia wɔ tumi, na ne kɛse te dɛn, nanso sɛ yɛde toto nsoromma foforo ho a ɛte dɛn?
4 Sɛnea ebia wunim no, owia yɛ nsoromma. Ɛte sɛ nea ɛso sen nsoromma a yehu no anadwo no, efisɛ sɛ yɛde toto ho a, owia no bɛn yɛn kɛse. Ano yɛ den dɛn? Owia no mfinimfini hyew bɛyɛ digrii celsius 15,000,000. Sɛ wubu owia no mfinimfini fã bi a ne kɛse te sɛ akoroteaa tĩ ba asase yi so a, wuntumi nnyina mmɛn saa ade ketewaa a ɛyɛ hyew no kilomita 140! Anibu biara mu no, tumi a efi owia mu ba ne nuklea atopae ɔpehaha pii mu tumi yɛ pɛ.
5 Owia no sõ araa ma wobetumi de yɛn asase yi bɛboro 1,300,000 ahyɛ mu ma ayɛ yiye. So owia ne nsoromma a ɛso sen biara? Dabi, nsoromma ho animdefo frɛ no nsoromma ketewa a ɛte sɛ akokɔsrade. Ɔsomafo Paulo kyerɛwee sɛ “ɛsonsono nsoromma mmiako mmiako anuonyam.” (1 Korintofo 15:41) Ná anka ɛnyɛ ade a obetumi ahu nokware a saa nsɛm a efi honhom mu no yɛ. Nsoromma bi wɔ hɔ a ɛsõ araa ma sɛ wɔde too baabi a owia no da no a, anka yɛn asase no bɛkɔ akɔhyɛ mu. Nsoromma kɛse foforo wɔ hɔ a sɛ wɔde too baabi a owia no da no a, anka ɛbɛkɔ akɔka Saturn—nanso saa okyinnsoromma no mmɛn asase koraa ma egyee wimhyɛn a wɔde kɔ okyinnsoromma so a etu mmirika sen aboba a wɔtow fi otuo a ano yɛ den mu mmɔho 40 no mfirihyia anan ansa na ɛredu hɔ!
6. Ɔkwan bɛn so na Bible da no adi sɛ nsoromma dodow sen nea nnipa betumi akyerɛ?
6 Nea ɛyɛ nwonwa koraa ne nsoromma no akɛse ne ne dodow. Nokwarem no, Bible kyerɛ sɛ nsoromma dodow nni ano, na ne kan yɛ den sɛ “mpoano nhwea.” (Yeremia 33:22) Saa asɛm yi kyerɛ sɛ nsoromma a ɛwɔ hɔ dɔɔso koraa sen nea yɛde yɛn aniwa hu no. Sɛnea ɛte no, sɛ Bible kyerɛwfo te sɛ Yeremia hwɛɛ wim anadwo bɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛkan nsoromma a otumi hu a, anka bɛyɛ mpem abiɛsa anaa nea ɛte saa pɛ na obetumi akan, efisɛ dodow a ɛte saa na onipa aniwa ankasa betumi ahu wɔ anadwo a ewim tew no. Yebetumi de dodow a ɛte saa atoto anhwea dodow a ɛyɛ nsa ma ho. Nanso, nokwarem no, nsoromma dodow dɔɔso yiye, ɛte sɛ “mpoano nhwea.” * Hena na obetumi akan dodow a ɛte saa?
“Ɔbobɔ wɔn nyinaa din frɛfrɛ wɔn”
7. (a) Nsoromma bɛyɛ ahe na ɛwɔ yɛn Milky Way nsoromma kuw no mu, na ɛdɔɔso dɛn ankasa? (b) Dɛn nti na den a ɛyɛ sɛ nsoromma ho animdefo bɛkan nsoromma akuw dodow no ho hia, na Yehowa adebɔ tumi ho ade bɛn na eyi kyerɛkyerɛ yɛn?
7 Yesaia 40:26 bua sɛ: “Momma mo ani so nhwɛ ɔsoro, na monhwɛ nea ɔbɔɔ eyinom. Ɔno na obu wɔn dɔm ano yi wɔn adi, na ɔbobɔ wɔn nyinaa din frɛfrɛ wɔn.” Dwom 147:4 ka sɛ: “Ɔkyerɛ nsoromma dodow.” “Nsoromma dodow” yɛ ahe? Eyi nyɛ asɛmmisa a ɛyɛ mmerɛw. Nsoromma ho animdefo bu akontaa sɛ nsoromma bɛboro ɔpepepem 100 na ɛwɔ Milky Way nsoromma kuw no nkutoo mu. * Nanso, yɛn nsoromma kuw no yɛ nsoromma akuw pii no mu biako pɛ, na nsoromma akuw pii wɔ hɔ a emu nsoromma dɔɔso yiye. Nsoromma akuw ahe na ɛwɔ hɔ? Nsoromma ho animdefo binom abu akontaa sɛ ɛyɛ ɔpepepem 50. Afoforo nso abu akontaa sɛ ne dodow betumi adu ɔpepepem 125. Enti onipa ntumi nkyerɛ nsoromma akuw dodow mpo, na kampɛsɛ sɛ wɔatumi akyerɛ nsoromma ɔpepepem pii a ɛwom no dodow. Nanso, Yehowa nim ne dodow. Afei nso, ɔto nsoromma biara din!
8. (a) Ɔkwan bɛn so na wobɛkyerɛkyerɛ Milky Way nsoromma kuw no kɛse mu? (b) Ɔkwan bɛn so na Yehowa hwɛ ma ɔsoro abɔde kyinkyin pɛpɛɛpɛ?
8 Sɛ yesusuw nsoromma akuw no akɛse ho a, ɛma nidi a yɛwɔ ma Ɔbɔadeɛ no mu yɛ den kɛse. Wɔabu akontaa sɛ egye hann mmirika bɛyɛ mfirihyia 100,000 na ɛde atwa Milky Way nsoromma kuw no ho fi tia akɔka tia. Susuw hann bi a ɛretu mmirika kɛse a ɛyɛ kilomita 300,000 anibu biara mu no ho hwɛ. Ebegye saa hann no mfirihyia 100,000 na ɛde atwa yɛn okyinnsoromma yi ho fi tia akɔka tia! Na nsoromma akuw bi soso sen yɛn de no mpɛn pii. Bible ka sɛ Yehowa ‘trɛw’ ɔsoro kɛse yi mu sɛnea ɔretrɛw ntama mu. (Dwom 104:2) Ɔno nso na ɔhwɛ sɛnea saa abɔde yi kyinkyin no so. Efi nsoromma so mfutumawa so kosi nsoromma kuw a ɛso sen biara so no, biribiara kyinkyin sɛnea abɔde ho mmara a Onyankopɔn ahyehyɛ na ɛyɛ adwuma no kyerɛ. (Hiob 38:31-33) Enti, nyansahufo de sɛnea ɔsoro abɔde kyinkyin pɛpɛɛpɛ no toto sɛnea obi a onim asaw paa dannan ne ho pɛpɛɛpɛ no ho! Afei, susuw Onii a ɔbɔɔ saa nneɛma yi no ho hwɛ. So Onyankopɔn a ɔwɔ adebɔ tumi kɛse saa no ho nyɛ wo nwonwa?
‘Nea Ɔde Ne Tumi Yɛɛ Asase’
9, 10. Ɔkwan bɛn so na mmeae a okyinnsoromma a etwa owia ho hyia, Jupiter, asase, ne ɔsram wɔ no da Yehowa tumi adi?
9 Yehu Yehowa adebɔ tumi ho adanse wɔ yɛn fie, asase yi so. Ɔde ahwɛyiye de asase asɛn baabi wɔ amansan kɛse yi mu. Nyansahufo binom gye di sɛ nsoromma akuw no pii betumi ayɛ nea nkwa ntumi ntra so, ɛnte sɛ yɛn okyinnsoromma yi a nkwa wɔ so no. Ɛda adi sɛ wɔanyɛ yɛn Milky Way nsoromma kuw no fã kɛse no ara sɛ nkwa ntra so. Nsoromma pii wɔ nsoromma kuw no mfinimfini. Hann a ɛwɔ hɔ no ano yɛ den, na nsoromma a ɛwɔ hɔ no taa yɛ sɛnea ɛreyɛ apempem. Nneɛma a ɛho hia na ama nkwa atra ase nni anoano no. Wɔde yɛn okyinnsoromma kuw no ahyɛ baabi a ɛfata.
10 Asase nya bammɔfo kɛse bi a ɔwɔ akyirikyiri—okyinnsoromma Jupiter—so mfaso. Jupiter kɛse sen Asase mpɛn mpempem pii, na tumi a ɛtwe ade ba fam a ɛwom no nya asase so nkɛntɛnso kɛse. Dɛn na ɛyɛ? Egye nneɛma a etu fa ahunmu no anaasɛ ɛbɔ kɔ nkyɛn. Nyansahufo kyerɛ sɛ sɛ ɛnyɛ Jupiter a, anka nneɛma a ɛbɛba abɛhwehwe asase so ano bɛyɛ den asen nea ɛba so mprempren no mmɔho 10,000. Yɛn asase yi nya nsoromma soronko bi—ɔsram—a ɛbɛn yɛn fie no so mfaso. Ɔsram no yɛ nneɛma pii sen fɛ a ɛyɛ ne “anadwo hann” a ɛma, ɛno na ɛma yɛn asase a akyea kakra no tumi gyina pintinn. Kyea a asase no akyea kakra no na ɛma yenya ɔpɛ bere ne osutɔ bere—ade foforo a ɛho hia na ama nkwa atumi atra asase so.
11. Ɔkwan bɛn so na wɔyɛɛ ahunmu a ɛwɔ asase ho no ma abɔ yɛn ho ban?
11 Yehowa adebɔ tumi da adi wɔ asase so adwinni biara ho. Fa ewim a edi dwuma sɛ suhyɛ a ɛkata yɛn atifi no sɛ nhwɛso. Tumi a efi owia no mu ba no bi yɛ nea ɛma akwahosan, na ebi nso di awu. Sɛ tumi a edi awu no bedu wim a, ɛma mframa pa dan owia mu ahoɔden a ɛsɛe ade. Owia mu ahoɔden no nso gye mframa a edi awu no. Enti wɔnwenee yɛn asase yi a ɛwɔ n’ankasa kyinii a ɛbɔ ho ban!
12. Ɔkwan bɛn so na kyinhyia a nsu di wɔ ahunmu no kyerɛkyerɛ Yehowa adebɔ tumi mu?
12 Ɛno yɛ mframa a adi afra wɔ ahunmu ma ɛyɛ nwonwa a ɛwowaw abɔde a nkwa wom a wɔte asase so anaa ewim no ho ade biako pɛ. Ahunmu nneɛma a ɛyɛ nwonwa no biako ne kyinhyia a nsu di no. Afe biara owia twe nsu kilomita ahinasa 400,000 sɛ tutuw fi ɛpo mu kɔ wim. Nsu no dan osuwusiw na ewim mframa de kyinkyin kɔ akyirikyiri. Afei, nsu a wɔasɔn so ma emu atew no tɔ ma ebi yɛ sukyerɛma, ne nsukyenee, na ɛma yenya nsu. Ɛte sɛ nea Ɔsɛnkafo 1:7 ka no pɛpɛɛpɛ: “Nsubɔnten nyinaa sen kɔ po mu, nanso ɛpo renyɛ ma: Faako a nsubɔnten no nennam kɔ no, ɛhɔ ara na ɛsan kɔ bio.” Yehowa nkutoo na obetumi ayɛ kyinhyiadi a ɛte saa ho nhyehyɛe.
13. Ɔbɔadeɛ no adebɔ tumi ho adanse bɛn na yehu wɔ asase so afifide ne dɔte mu?
13 Baabi a yehu nkwa no, yehu Ɔbɔadeɛ no tumi ho adanse wɔ hɔ. Yehowa adebɔ tumi da adi wɔ nnua akɛse kɔkɔɔ a ne tenten sen abansoro a ɛtoatoa so 30 ne afifide ketewaa paa a ɛwɔ po ase a ɛma yenya mframa pa a yɛhome no pii no ho. Abɔde a nkwa wom ahyɛ dɔte mu ma,—asunson, ntuw, mmoawammoawa—na ne nyinaa bom di dwuma wɔ akwan a ɛyɛ nwonwa so boa ma afifide nyin. Ɛfata yiye sɛ Bible ka asase ho asɛm sɛ ɛwɔ tumi.—Genesis 4:12, NW.
14. Tumi a wonhu bɛn na ɛwɔ atɔm ketewaa mu?
14 Akyinnye biara nni ho sɛ, Yehowa na “ɔde ne tumi yɛɛ asase.” (Yeremia 10:12) Onyankopɔn tumi da adi wɔ n’abɔde nketenkete koraa ho. Sɛ nhwɛso no, atɔm ɔpepem pii a wɔaka abom no kɛse nnu nnipa ti nhwi biako. Na sɛ mpo wɔtwe atɔm mu ma ne tenten yɛ sɛ abansoro a ɛtoatoa so 14 mpo a, ne mfinimfini kɛse bɛyɛ sɛ nkyenesiam fua a wɔde ato abansoro a ɛto so ason so. Nanso, saa mfinimfini ketewaa no mu na nuklea topae tumi kɛse a ɛtow no hyɛ!
“Nea Ɛhome Nyinaa”
15. Bere a Yehowa kaa mmoa akɛse ho asɛm no, na dɛn na ɔrekyerɛ Hiob?
15 Yehowa adebɔ tumi ho adanse foforo a ɛda adi ne mmoa pii a wɔwɔ asase so no. Dwom 148 bobɔ nneɛma pii a eyi Yehowa ayɛ no din, na nkyekyɛm 10 de “wuram mmoa ne afieboa nyinaa” ka ho. Bere a Yehowa reda nea enti a ɛsɛ sɛ onipa suro Ɔbɔadeɛ no adi akyerɛ Hiob no, ɔkaa mmoa te sɛ gyata, sare so afurum, ɛkoɔ, Behemot (anaa susono), ne Lewiatan (ɛda adi sɛ ɔdɛnkyɛm), ho asɛm. Ɔde kyerɛɛ dɛn? Sɛ onipa suro mmoa akɛse a wɔn ho yɛ hu a wontumi nnwudwo wɔn yi a, ɛnde na ɛsɛ sɛ ɔte nka dɛn wɔ ne Bɔfo no ho?—Hiob, ti 38-41.
16. Dɛn na ɛyɛ wo nwonwa paa wɔ nnomaa a Yehowa abɔ no bi ho?
16 Dwom 148:10 nso ka “ntakraboa” ho asɛm. Wo de susuw ntakraboa ahorow a ɛwɔ hɔ ho hwɛ! Yehowa kaa sohori, a “ɔserew ɔpɔnkɔ ne ne sotefo” ho asɛm kyerɛɛ Hiob. Nokwarem no, anomaa a ne tenten yɛ mita 2.5 no ntumi ntu de, nanso otumi tu mmirika kilomita 65 dɔnhwerew biara, na otu anammɔn biako biara a otumi twa mita 4.5! (Hiob 39:13, 18) Saa ara na anomaa bi a wɔfrɛ no albatross di ne nkwa nna dodow no ara wɔ wim wɔ po so. Anomaa a otu fãã yi trɛw ne ntaban mu a ne tenten bɛyɛ mita 3. Otumi kyinkyin wim nnɔnhwerew pii a ɔmmɔ ne ntaban mu. Ɔkwan foforo so no, aserewa ne anomaa a osua koraa wɔ wiase a ne tenten yɛ sɛntimita 5 pɛ. Otumi bɔ ne ntaban mu mpɛn 80 wɔ anibu biako mu! Aserewa a ɔnenam wim a ɔhyerɛn sɛ hyerɛmmo no betumi asensɛn faako te sɛ helikopta, na otumi tu kɔ n’akyi mpo.
17. Bonsu kɛse te dɛn, na sɛ yesusuw mmoa a Yehowa abɔ ho a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛka?
17 Dwom 148:7 ka sɛ “nsuboa akɛse” mpo yi Yehowa ayɛ. Susuw aboa a wɔtaa kyerɛ sɛ ɔne aboa a ɔso sen biara a watra okyinnsoromma yi so pɛn, bonsu, ho hwɛ. ‘Asuboa kɛse’ yi a ɔda nsu ase no tenten betumi adu mita 30 anaa nea ɛboro saa. Ne mu duru betumi adu asono akɛse 30 de. Ne tɛkrɛma nkutoo mu duru te sɛ ɔsono biako mu duru. Ne koma te sɛ kar ketewa. Akwaa kɛse yi bɔ mpɛn 9 pɛ wɔ simma biako mu—a ɛne aserewa koma a ɛbɔ bɛyɛ mpɛn 1,200 wɔ simma biako mu no bɔ abira. Anyɛ yiye koraa no, bonsu no ntini a mogya fam no biako yɛ kɛse araa ma abofra betumi awea wom. Akyinnye biara nni ho sɛ yɛn koma bɛka yɛn ma yɛaka nsɛm a wɔde wie Nnwom nhoma no bi sɛ: “Momma nea ɛhome nyinaa nyi Yah ayɛ. Munyi [Yehowa, NW] ayɛ!”—Dwom 150:6.
Yehowa Adebɔ Tumi Ho Ade a Yebesua
18, 19. Nneɛma a nkwa wom a Yehowa abɔ wɔ asase yi so no gu ahorow dɛn, na dɛn na adebɔ kyerɛkyerɛ yɛn wɔ ne tumidi ho?
18 Dɛn na yesua fi Yehowa adebɔ tumi a ɔde di dwuma no mu? Adebɔ mu nneɛma a egu ahorow no ma yɛn ho dwiriw yɛn. Odwontofo bi kae sɛ: “[Yehowa, NW], wo nnwuma dɔɔso dɛn ara, . . . w’abɔde ahyɛ asase so ma.” (Dwom 104:24) Hwɛ sɛnea ɛyɛ nokware! Abɔde a nkwa wom ho animdefo ahu abɔde a nkwa wom ahorow bɛboro ɔpepem biako wɔ asase so; nanso wɔn adwene nhyia wɔ sɛ ebia abɔde a nkwa wom pii bɛyɛ ɔpepem 10, ɔpepem 30, anaa nea ɛboro saa na ɛwɔ hɔ no ho. Ɛtɔ mmere bi a mfoniniyɛfo hu sɛ adwinni nyansa a ɔwɔ asa. Nea ɛne no bɔ abira no, ɛda adi sɛ Yehowa adwinni nyansa—tumi a ɔwɔ sɛ obetumi ayɛ nneɛma foforo a egu ahorow no—nsa da.
19 Yehowa adebɔ tumi a ɔde di dwuma no kyerɛkyerɛ yɛn biribi fa ne tumidi ho. Asɛmfua “Ɔbɔadeɛ” no ma Yehowa da nsow fi biribi foforo biara a ɛwɔ amansan yi mu a ne nyinaa yɛ “abɔde” no ho. Wɔmfrɛɛ Yehowa Ba a ɔwoo no koro no mpo a odii dwuma sɛ ‘odwumayɛni a waben’ bere a na wɔrebɔ ade no Ɔbɔadeɛ anaa Ɔbɔadeɛ yɔnko da wɔ Bible no mu. (Mmebusɛm 8:30; Mateo 19:4) Mmom no, ɔyɛ ‘abɔde nyinaa abakan.’ (Kolosefo 1:15) Yehowa gyinabea sɛ Ɔbɔadeɛ no ma ɔfata koraa sɛ ɔno nkutoo na odi amansan nyinaa so tumi.—Romafo 1:20; Adiyisɛm 4:11.
20. Ɔkwan bɛn so na Yehowa ahome fi bere a owiee asase so nneɛma bɔ no?
20 So Yehowa mfa n’adebɔ tumi no nni dwuma bio? Wiɛ, Bible ka sɛ bere a Yehowa wiee adebɔ wɔ adebɔ da a ɛto asia no ‘ɔhome fii n’adwuma a ɔyɛe nyinaa ho wɔ da a ɛto so ason no’ mu. (Genesis 2:2) Ɔsomafo Paulo kyerɛe sɛ saa ‘da’ a ɛto so ason yi tenten yɛ mfirihyia mpempem pii, efisɛ na ɛda so ara rekɔ so wɔ ne nna no mu. (Hebrifo 4:3-6) Nanso, so ‘home’ no kyerɛ sɛ Yehowa agyae adwumayɛ koraa? Dabi, Yehowa nnyae adwuma da. (Dwom 92:4; Yohane 5:17) Ɛnde, na ne home no bɛfa asase so nneɛma a aniwa hu a owiee yɛ ho. Nanso, n’adwuma a ɔnam so bɛma n’atirimpɔw ahorow abam no akɔ so abedu nnɛ. Honhom mu a wofi kyerɛw Kyerɛw Kronkron no ka adwuma a ɛte saa no ho. “Abɔde foforo” a ɔyɛe a yebesusuw ho wɔ Ti 19 mu no ka n’adwuma no ho.—2 Korintofo 5:17.
21. Ɔkwan bɛn so na Yehowa adebɔ tumi benya nnipa a wodi nokware so nkɛntɛnso akosi daa?
21 Sɛ Yehowa homeda no ba awiei koraa a, obetumi aka n’adwuma a ɛwɔ asase so nyinaa no ho asɛm sɛ “eye papa,” sɛnea ɔyɛe wɔ adebɔ nna asia no awiei no. (Genesis 1:31) Sɛnea ebia ɔde n’adebɔ tumi a enni ano no bedi dwuma wɔ ɛno akyi de, yennya nhui. Sɛnea ɛte biara no, yebetumi anya ahotoso sɛ yɛn ani begye sɛnea Yehowa bɛkɔ so de n’adebɔ tumi no ayɛ adwuma no ho. Yɛnam Yehowa adebɔ so besua ne ho ade pii akosi daa. (Ɔsɛnkafo 3:11) Dodow a yesua ne ho ade no, dodow no ara na yenya nidi ma no kɛse—na yɛbɛbɛn yɛn Bɔfo Kɛse no yiye.
^ nky. 2 Nea ɛbɛyɛ na woate nɔma no kɛse ase no, susuw eyi ho hwɛ: Sɛ wode kar retwa saa kwan no—ɛde dɔnhwerew koro biara twa kilomita 160 nnɔnhwerew 24 da biara mpo—a, wode bɛboro mfirihyia ɔha na ebetwa!
^ nky. 6 Ebinom susuw sɛ ɛbɛyɛ sɛ tetefo a wɔtraa ase Bible mmere mu no de tete afiri a wɔde hwɛ akyirikyiri ade dii dwuma. Asɛm no toa so sɛ, sɛ ɛnte saa a, anka ɛbɛyɛ dɛn na nnipa a wɔtraa ase saa mmere no mu no betumi ahu sɛ nsoromma dɔɔso araa ma nnipa ntumi nkan ne dodow? Nsusuwii a ɛtete saa a enni nnyinaso mma wɔmfa anuonyam mma Yehowa, Bible no Kyerɛwfo no.—2 Timoteo 3:16.
^ nky. 7 Susuw bere a ebegye na wode akan nsoromma ɔpepepem 100 ho hwɛ. Sɛ wutumi de anibu biako kan foforo—na woyɛ saa nnɔnhwerew 24 da koro—a, ebegye wo mfirihyia 3,171!
Dwom 8:3-9 Ɔkwan bɛn so na Yehowa adebɔ betumi akyerɛ yɛn ahobrɛase?
Dwom 19:1-6 Dɛn na Yehowa adebɔ tumi bɛkanyan yɛn ma yɛayɛ, na dɛn ntia?
Mateo 6:25-34 Ɔkwan bɛn so na Yehowa adebɔ tumi ho a yebesusuw betumi aboa ma yɛako atia dadwen na yɛde nneɛma a ɛfata asisi yɛn ani so wɔ asetram?
Asomafo no Nnwuma 17:22-31 Ɔkwan bɛn so na Yehowa de adebɔ tumi kyerɛ yɛn sɛ abosonsom nye na Onyankopɔn bɛn yɛn?
Hwɛ nea yebetumi ayɛ de aboa nkurɔfo ma wɔahu Ɔbɔadeɛ no ho nokwasɛm na yɛn ankasa nso anya ne mu gyidi.